Maple ginnala or riverine (Acer ginnala): nkọwa, ngwa na nhazi ihu ala, oyi hardiness, kụrụ ma na-elekọta, foto - Mkpụrụ ubi - 2020
Ụdị nke ọma: àgwà na njirimara nke ọrụ ugbo
Ndị na-achọ obere osisi nke nwere ike kụrụ dị ka ogige ma ọ bụ iji mepụta ebe ndị mara mma, a gwara ndị na-emepụta ebe ọdịda anyanwụ ka ha ṅaa ntị na maple. Nke a bụ obere osisi nwere okpueze buru ibu, nke ga-enye aka kpuchie ụlọ okpomọkụ gị site na prying anya, chebe ya site na nchịkọta, kpuchie ya site na anyanwụ, na ọdịda ga-atọ gị ụtọ na-acha akwụkwọ ndụ agba. Otu esi eto osisi na otu o choro nlekọta, ị ga-amụta site na isiokwu ahụ.
Ebee ka eto eto
Ihe ndi mmadu bu
Nkwado maka eto eto Ginnal
Vidio: otu esi akụ mkpụrụ osisi
Ọdịdị na nkọwa botanical
Cannon maple maple (Acer ginnala) bụ nke otu aha na ezinụlọ Sapindovye. Ọ bụghị ogologo osisi shrub ma ọ bụ osisi.
Elu Na-eto eto site na 3 ruo 8 m.
Barrel. Obere Ọ na-eto na dayameta site na 0.2 ruo 0,4 m.
Okpueze. Nile, dị ka nke a tent. Na-aga na dayameta site na 5 ruo 7 m.
Bark Ọ nwere ihe dị mma dị mma, na-ese ya na aja aja na agba ntụ. Osisi ndị ochie na-ama jijiji.
Alaka. Mkpa, na-eto eto na-eto eto. Ọcha ọbara ma ọ bụ aja aja.
Usoro mgbọrọgwụ Elu, nnukwu.
Doo. Mgbochi, dị mfe. Ịga ogologo site na 4 ruo 10 cm, obosara - site na 3 ruo 6 cm. Ekewara n'ime atọ ahịrị. Onu ogugu ndi ozo di obere. Mgbe ọ na-eto, ọkpụkpụ na-abaghị uru. Akwụkwọ ahụ na-eto n'elu petioles na ogologo nke 3 ruo 5 cm, bụ nke na-enwekarị ụcha pinkish. Ha nwere ezigbo ụlọ, na-ese na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị.
Okooko osisi Gosipụta na mmiri - mgbe ahụ, mgbe epupụta zuru ezu oge ntoju. Nwee odo odo-acha odo odo. Ọkara dị nha - site na 0,5 ruo 0,8 cm n'obosara. Ejikọtara ya na inflorescences n'ụdị brush-panicles. Nwee ísì ụtọ dị ụtọ. Okooko na-adị site na izu 2 ruo 3.
Mkpụrụ. Ná ngwụsị nke okpomọkụ, e nwere paired lionfish. Ogologo ha dị site na 0.8 na 1 cm ma n'obosara site na 3 ruo 6 cm. Nke mbụ, a na-ese mkpụrụ osisi na agba ọbara ọbara, mgbe ahụ na-acha aja aja.
Ọnụ ọgụgụ na-eto eto. Na-agafeghị oke. Uto nke afọ si na 30 ruo 50 cm.
Ọdịdị. Osisi a dị ogologo - na nkezi, ndụ ruo otu narị afọ, ma ihe ndekọ ndị toro eto, nke mere ememe ncheta 250 ha, na-edekwa.
Ị ma? Akwukwo akwukwo nke ndi Canada mere dika akara ala site na iri afo nke 18. Kemgbe 1965, e jidere ya na ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke Canada. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-edozi shuga bụ akụ na ụba kachasị mkpa nke akụ na ụba, a na-eji ha emepụta osisi, ntinye shuga, maka nkwadebe nke sirop nke maple.
Ebe obibi nke ụdị anụ a bụ East Asia, South Siberia. A na-achọta ya n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Mongolia, Korea, Japan, na China. Ọ na-etolite na ndagwurugwu osimiri, oké osimiri. N'ihi njirimara ikpeazụ, ma nweta aha nke abụọ - riverine. A pụkwara ịchọta ya na ugwu ugwu, na oke ọhịa.
Nke a dịgasị iche iche bụ ezigbo osisi mmanụ aṅụ. Mmanụ aṅụ nke anakọtara site na mple ginnal nwere 2.5% shuga na ruo 30% tannins.
Ghọọ onwe gị na ụdị anụ ndị a kasị mara amara: uhie, Norway, Tatar, Manchu, Japanese, na ash-leaved (American).
Nnụnụ na-anọrọ na okpueze gbara okpueze nke osisi ahụ, osisi ya na-asọpụrụ bullfinches. Buds na Alaka na-enwe mmasị iri nri squirrels.
A na-achọ ka a na-eji akpa mmiri na-arụ ọrụ n'oge niile. Ọ nwere okpueze mara mma, ọ bụ ihe mbụ mgbe ọ na-agba. Mgbe ottsvetaniya ya mma ghọọ lionfish. Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke decorativeness na-eme na ọnwa mgbụsị akwụkwọ - ọ bụ mgbe ahụ na epupụta atụgharị odo, oroma na ọkụ na-acha uhie uhie.
A na-ejikarị ụdị a eme ihe na ogige ntụrụndụ kemgbe narị afọ nke XIX. Jiri ya na otu na-ebute. Ekebere n'akụkụ osimiri, ọdọ mmiri, ebe a na-agbanye. Ndị agbata obi ya kachasị mma bụ dogwood, loch, coniferous crops, snowberry.
N'ebe ọdịbendị, ụdị a bụ ihe a na-ahụkarị n'ebe ugwu Europe na n'Ebe Ugwu America. Na Japan, a na-eji ya eme ihe eji achọ mma.
N'ihi na ọ bụ ọgaranya, a na-enye maple ụdị ọrịa dị iche iche. Na-aguta banyere iji maple na nkà mmụta ọgwụ.
Ginnala Maple - ọ bụghị osisi dị egwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ chọrọ maka ebe eto na-eme. Ya mere, osisi ahụ nwere ike iru ogo kachasị elu karịa mgbe ị na-asọba na ebe dị mma. A na-ekwe ka nkedo ọkụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị na-akụ mkpụrụ osisi na ndò, ọ ga-atụfu zest na ọdịda n'ụdị akwụkwọ uhie. Dị ka ọtụtụ osisi ndị ọzọ, ha ga-abụ odo.
A ghaghị kpoo ụdị dịgasị iche ebe a na-adịghị akwa akwa. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, mgbe ahụ, ịkwesịrị ilekọta ngwá ọrụ nke nnukwu mmiri drainage - na olulu ọdịda kwesịrị itinye akwa nkume 10-20-centimita nke gravel. Ọ bụrụ na ala dị oke limy, a ga-etinye ya na ya. Enwere ike ịba ala ala site n'itinye aka na ọdịda n'okpuru nchịkọta nke humus ma ọ bụ compost (4-8 n'arọ kwa 1 sq. M).
Site na mejuputa ala, maple a naghi acho, o nwere ike ibi ndu na ala obula, ma obughi ibu. PH kachasị elu bụ 6-7.5. Ọ bụrụ na ala dị arọ dị na saịtị ahụ, ọ ga-adị mkpa itinye ego ájá tupu ị kụọ osisi ahụ. Osisi anaghị anabata salinization, ọ malitere ịmepụta nsogbu. Ya mere, ọ dị mkpa iji hụ na nke a anaghị eme.
Iji chọpụta ala nke osisi ahụ ga-akacha mma, gụọ otú ị ga-esi jiri aka gị kpebie ịdị acidity nke ala ahụ.
Mkpebi nke ala acidity na ngwaọrụ pụrụ iche
Ọ bụ ezie na osisi ahụ nwere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dị oke ma dị ike, ọ na-eburu ifufe, n'ihi ya, ọ bụghị egwu ma ọ bụrụ na saịtị ahụ adịghị echebe site na ntanetị.
N'ihe banyere oyi hardiness, ụdị dịgasị iche iche bụ nke kachasị sie ike ma na-eguzogide ntu oyi, ya mere ọ na-etolite n'enweghị nsogbu na mpaghara ebe ugwu.
E nwere ike ime ihe na mmiri na mgbụsị akwụkwọ. Ọ dị mkpa iji dozie oghere ọdịda. Usoro a malitere izu abụọ ma ọ bụ izu atọ tupu e tinye ya n'ime ya. Emere ya ihe dika 0.7 m n'obosara na 0,5 m n'obosara; Na-egwu olulu maka akuku osisi
A kwadebere ala ngwakọta site na ihe ndị na-esonụ:
humus (peat compost) - akụkụ atọ;
ala sod - akụkụ abụọ;
ájá bụ otu akụkụ.
Ọ bụrụ na e mere atụmatụ na osisi ga-eto n'otu n'otu, mgbe ahụ, anya dị n'etiti osisi ndị dị n'akụkụ kwesịrị ịdị na 2 ruo 4 m. Mgbe ị na-akụ n'ime ogige, ebe dị anya kwesịrị ịdị 1.5-2 m.
Tupu ịgha ala ala olulu a ghaghị ịtọpụ ya. Iji mee nke a, ị nwere ike igba ya ọtụtụ ugboro na ndụdụ.
Ọ bụrụ na a kụrụ osisi na oke, ọ dị mkpa igwu olulu mmiri ma kụọ ya, na-ahapụ ebe dị 1-1.5 m. N'okwu a, a ga-enwe ike ịmalite ikiri olu ike - ruo 5 cm. Anyị na-egwu olulu maka ịkọ osisi
A ghaghị ịhọrọ Sapling na ụlọ akwụkwọ ọpụrụiche. Ọ ka mma iwepụta akwụkwọ afọ abụọ. Ọ ghaghị ịdị na-ele ahụ anya, na-enweghị ihe ịrịba ama nke nkwụsị, ntụpọ, mmebi. Ọ bụrụ na usoro mgbọrọgwụ nke seedling na-emeghe, mgbe ahụ ị ga-achọ ijide n'aka na ihe niile dị na ya, ọ na-ezu ezu mepụtara na enweghị ọnya na ire ere ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ.
Jiri nlezianya debe mkpụrụ osisi ahụ na olulu mmiri na-akwadebe ma gbanwee usoro mgbọrọgwụ. Ugwo olu ya n'otu oge kwesiri ibu ala. Mgbe olulu ahụ jupụtara na ngwakọta a kwadebere. Mgbe ejighị ya kpọrọ tamped. Ịghapụta Maple Ginnal
Ozugbo akukuchara, osisi ga achoro ibu mmiri, ala nke di gburugburu ebe a ga-agbazi ya site na ohia, ahịhịa, lapnik, sawdust. A na-etinye Mulch na oyi akwa nke 5-10 cm. Ọ ga - ekwe ka mmiri dị na mgbọrọgwụ, iji kpoo ha ọkụ n'oge oyi ma zọpụta site na mpụta nke ahịhịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji chebe osisi ahụ ka ọ ghara ịnwe nsogbu nsogbu ụwa, chọpụta ihe mere i ji chọọ ịcha ala, karịsịa n 'ọrụ nke ọrụ ugbo.
Mgbe akuku, ihe ndi ozo ga choro oru nlebara anya, nke ga - adi:
Ọ ga-adị mkpa iji mmiri na-aṅụ mmiri mgbe nile - otu ugboro n'ọnwa, na oge akọrọ - otu ugboro n'izu, na-eji lita 15 ruo 20 kwa osisi. Mgbe ị kụrụ, mmiri a na-eme kwa izu, na-eme ka okpukpu abụọ nke mmiri.
Ọ dị mkpa! Mgbe atọ, mmiri kwesịrị ịka ala 0,5 m miri emi.
Mgbe ogbugba mmiri, iji zere hardening nke ụwa na ya gburugburu nke a gburugburu ọ ga-adị mkpa iji tọpụ. A na-emechi mkpuchi - site na 5-7 cm iji ghara imebi usoro mgbọrọgwụ elu.
A ga-achọkwa weghasị ahịhịa na-ewepụta mmiri na-enye ndụ na ihe oriri sitere na maple.
Ọ bụrụ na enweghi ihe akuku mineral n'oge a kụrụ, otu afọ mgbe a kụrụ, n'oge opupu ihe ubi, a ghaghị ịkụzi osisi ahụ. Maka nzube a, jiri urea (40 g kwa 1 sq. M.), Potassium salt (15-25 g), superphosphate (30-50 g). Urea
N'oge ọkọchị, mgbe ị na-atọpụ, ị nwere ike ịme fatịlaịza zuru ezu. Ekwesiri "Kemira Universal" (100 g kwa 1 sq. M).
A ghaghị ịkpụcha ntutu isi mbụ otu afọ mgbe a kụrụ (mmiri). Kwachaa maple kwachaa ezigbo mma - ngwa ngwa weghachite. Ebe ọ bụ na ome ya nwere ụdị dị iche iche na-etolite ngwa ngwa, ọ na-achọsi ike ịhapụ ihe karịrị 7-10 cm nke mmụba kwa afọ mgbe ọ na-egbutu iji nweta oghere dị elu nke ngere, ma na-akwanyere ọdịdị ya anya dị ka trapezoid. Naanị mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ntutu isi na ụkpụrụ.
Iji meziwanye maple ma mee ka ọ ghọọ ọganihu n'ụzọ ziri ezi, chọpụta ihe niile ị ga-eme ka ọ dịchaa na mmiri, ụbịa na ọkọchị.
Mgbe ha na-eme ka okpokoro dị n'ụdị ala, a na-egbutu ha, na-ahapụ ihe karịrị 0,5 mita n'ịdị elu.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nnukwu mmiri oyi na-agba mmiri, akpa afọ mgbe ọ gbasịrị mgbọrọgwụ ya ka ga-ekpuchi tupu oge oyi. Ọ dị mma maka spruce alaka, akọrọ epupụta. Ka ọ na-etolite, ike oyi ga-amụba, osisi agaghịzi achọ usoro a.
Maple nwere ezigbo nsogbu, ma ọ bụghị otu narị percent. Ọ nwere ike ịta ahụhụ site na coral blotch, nke na-egosipụta onwe ya dị ka ọbara ọbara tụrụ na ogbugbo. Site na mmeri, a na-ewepụ alaka ndị na-egbu ahụ, ebe ndị a na-egbutu na-ekpuchi ogige ubi, a na-ejikwa osisi na-acha anụnụ anụnụ kpuchie osisi ahụ. Coral spotting
Mmiri powdery bụ ọrịa ọzọ dị ize ndụ maka osisi osisi. Ọ bụrụ na e nwere ihe ịrịba ama nke ibute ọrịa - nke na-acha ọcha mealy na epupụta - osisi ahụ kwesịrị ịbụ isi awọ na ude na ruru 2 ruo 1.
Na-aguta otu esi eto eto.
Osimiri mmiri ahụ nwere ọtụtụ ndị na-adịghị na-achọpụta ụdị ahụhụ ndị na-emerụ ahụ: whitefly, mealybug, weevil. A na - emeri whitefly maple site na ịpịkọta ụmụ ahụhụ - "Aktellik", "Aktaroy", "Amofos", wdg. A na - ebibi nsị site na ọgwụgwọ na Nitrafen, n'oge okpomọkụ - site na "Karbofos". "Chlorophos" na-enyere aka wepu ihe nkiri ahụ.
Ị ma? A na-eji ụta anwụrụ Daniel Daniel mee ka ọ bụrụ na ọ na-esi na American.
Ya mere, ihe ndi mmadu bu ihe ndi di nma bu ndi choro ichota ala ha na osisi mara mma. Idebe mma ya n'oge nile nke ahịhịa, karịsịa maple decoration na ọdịda - ọ bụ n'oge a ka epupụta ya na-acha ọbara ọbara. N'oge okpomọkụ, ọ ga-adị mkpa maka ịmepụta onyinyo. Osimiri mmiri dị mfe na-eto eto, ọ dịghị achọ nlekọta pụrụ iche na ngwa ngwa na-etolite. Enwere ike itolite na ebe ndi nwere obi ojoo, n'ihi na oyi bu oyi. Uru ya na-agụnye iguzogide ifufe, okpomọkụ na ọnọdụ obodo.
Ụdị ihe na-eme ka ụba buru ibu. Ọnụ ọgụgụ na-eto eto dị elu - n'oge afọ mbụ, ndị seedlings ruru nkezi elu 0,5 m.
Ọ nwere ihe ọkpụkpụ azụ, dị mkpa maka hedgerows - ọ na-ekpuchi mbubreyo ma doo epupụta n'oge. Mana n'ozuzu, ụlọ ahịa glenal mara ezigbo mma.
Ogo nke nsu nwere ike ịbụ ihe ọ bụla - site na mgbidi dị ndụ nke dị elu nke 2-3 m na nkwụsị na elu 0,5 m.
Ntu osisi: ebe dị n'etiti osisi dị n'usoro bụ 0,5-0.8 m. N'okpuru osisi abụọ, a na-etinye osisi ndị ahụ n'ime ihe nlele, ebe dị anya n'etiti ahịrị dị 0,4-0.7 m.
Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ na-eto eto dị elu, ị ga-achọ 4-6 haircuts kwa oge. Maka oghere ndị dị ala, ọ ka mma iji mkpịsị sloping si n'akụkụ nke mere ka ala ghara ịdọrọ.
Ihe ndị a dị mkpa maka ịmalite: ala ga-abụ ọgaranya na nri, ihe kachasị mkpa bụ na ogige nke Ginnal maple na-efunahụ mmetụta ya dị mma na ndò, ebe ọ bụ na a na-atọpụ ihe ọkụkụ ahụ, ya bụ. ọ dị mkpa ka ị akụ na anyanwụ.
M nwekwara Ginnala ... ha zụtara (ma ọ bụ 2006 ma ọ bụ 2007, edeghị ihe ndekọ ndị ahụ) na obere osisi a kpụrụ ... Mgbe oyi na-atụ mbụ, e nwere nnukwu friza na ogwe aka. M na-arịa ọrịa ruo ogologo oge: M gwakwara alaka ma hapụ akwụkwọ ahụ n'oge. N'ebe dị n'etiti oge ahụ, m na-ebipụ ya (dika o kwesịrị, na ihe niile anaghị amasị m) n'ihi nke a. Ọ na-adaba ruo otu afọ ọ na-atụ anya na ọ bụ Ome. Ana m agbalị ịkpụcha ihe nile ka o wepuo aka ... nke mere na site na ala (ọkacha mma site na mgbọrọgwụ, m na-eche ma ọ ga-emeli ya, iji bechapụ ntu oyi), Ome malitere, ma o doro anya na ọ bụghị ihe mgbapụta (na ntu oyi na-agbada n'ala). Ugbua ebe otu di na nwunye + afọ ka adịghị akọrọ ihe ọ bụla. N'oge opupu ihe ubi, mmiri mmiri na-amalite n'isi mmalite !! O yiri ka m, Talya *, lelee otú ọ ga-esi mee ka ọ daa mbà, otú ọ ga-esi na-eto eto, ma chee echiche banyere ihe ọ ga-eme ya.
Oma na botsad: Ahu m ubi mara nma n'ebe ahu, ma mgbe oyi mbu m nwere -50% nke ihe o bu (magbanyeghi na ejiri osisi lapnik dakwasi ya). N'ozuzu, ma gwa mgbe m zụtara :-D
Otu esi eji aka aka ha wuo ụlọ mgbanwe: ebe, ụdị
Atụmatụ na iwu maka ịdebe na inye nri hens